यसकारण म आस्थाको साथमा छु « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
यसकारण म आस्थाको साथमा छु
प्रकाशित मिति : २०७६, ७ माघ मंगलवार १९:०७
सुनिता दुलाल ।
गल्ती हुन्छ, मानिसबाटै हुने हो । जान या अन्जानमा हुन्छ ।सबै मानिसको एउटै स्वभाव हँुदैन कसैले अत्याचार सहन्छ त कसैले त्यसको बिरूद्धमा खरो उत्रन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको देशमा जनताले बोल्न पाउने अधिकार छ,अत्याचार परेको बेला म पनि बोल्छु । मान्छे मारेको होइन ।
रिसको आवेगमा आस्था बहिनीको बोलीमा केही शब्द चयन गलत भकै हो तर, उहाँ त्यो आफंैले फिल गरेर माफी मागिसकेको अबस्थामा बोल्दैमा आपराधिक चित्रण गरी गायिका आस्था राउतलाई पक्राउ पूर्जी तय गर्नु निन्दनीय छ । खोई त अब हाम्रो बोल्न पाउने अधिकार ? अब फेरि निरंकुश शासन नै लागू हुने हो त ? गल्ती दुबैबाट देखिन्छ दुबैको छानविन हुन जरुरी छ ।
सानोतिनो कुरालाई गल्ती पहिल्याई पछि लाग्नु भन्दा ठूला ठूला आपराधिक काम गर्नेलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनुस् छोरी कुटेर बुहारी तह लगाउने काम नगर्नुस् । न्याय नपाएका भौतारिएका, लुटिएका, ठगिएका ति जनताको सेवामा लाग्नुस् । देशका आशालाग्दा ठूला ठूला नेताज्यूहरूले पनि अन्तरबार्ता दिने क्रममा स्टुडियो भित्रै पत्रकार र जनतामाथि धेरै अपमानजनक शब्द बोल्दा खोई त पक्राउ पूर्जी ?
कानुन सबैको लागी बनेको होइन र ? अन्याय र अत्याचारबिरूद्ध बोल्ने पाउने अधिकार छ बाध्य भएर लेख्न मन लाग्यो । जसले जे टिकाटिप्पणी गरेपनि साधारण आवेशमा भएको गल्तीमा योसम्मको निर्णय गर्नु आपत्तिजनक छ । म आस्था राउतको साथमा छु ।
कुनै गम्भीर समस्याका विरामीको सरकारी अस्पतालमा उपचार नहुने तर अर्को निजी अस्पतालमा हुने !
केशवप्रसाद भट्टराई । नवीन्द्रराज जोशीको गम्भीर स्वास्थ समस्या, वीर अस्पताल अनि मै हूँ